Looks Nepal | » नेविसंघका नेता वादेले आत्महत्या गर्ने भन्दै गभर्नरलाई लेखे चिठ्ठि Looks Nepal नेविसंघका नेता वादेले आत्महत्या गर्ने भन्दै गभर्नरलाई लेखे चिठ्ठि – Looks Nepal
नेविसंघका नेता वादेले आत्महत्या गर्ने भन्दै गभर्नरलाई लेखे चिठ्ठि
Jun, 5, 2020	looksnepal
काभ्रेपलाञ्चाेक / नेपाल विद्यार्थी संघ काभ्रेेका विद्यार्थी नेता नृपेश वादेेेलेे सरकारले लिएकाे आर्थिक नितिका कारण आफू र आफू जस्ता धेरै नेपालि मर्कामा परेकाे र याे समयमा आफू समस्या बाट निस्कन गार्हाे भएकाे कारण आत्महत्या गर्ने भन्दै गभर्नरलाई सामाजिक संजालमा चिठ्ठि लेखेका छन् ।
पुर्ण पाठ पढ्नुहाेस ।
विषय : बैंकको किस्ता भुक्तानी बारे ।
उपरोक्त सम्बन्धमा सन्सारभरी कोरोना महामारीका कारण निकै ठुलो समस्या उत्पन्न भएको यहाँलाई अबगत नै छ । सोही अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समयदेखि लकडाउन जारी राखेको छ । हाल साथीको घर र सानो घडेरी बैंकमा धितो राखेर बैंकबाट बल्ल बल्ल ५० लाख ऋण लिएर बनेपामा सानो रेष्टुरेन्ट संचालन गर्ने व्यक्ति हुँ । लकडाउन हुनुभन्दा ठिक २ महिना अगाडि हिम्मत र साहस बोकेर सुरु गरेको मेरो रेष्टुरेन्टले मासीक ३/४ लाखको हाराहारीमा आम्दानी गर्दै आएको थियो । त्यममध्ये करिव १ लाख स्टाफ खर्च, ७५ हजार घरभाडा, बिजुली र पानी ३० हजार , सामान र तरकारी खरिदको करिव ९५ हजार बुझाउँदै आएको थिएँ । त्यसबाट बँचेको एकलाखमा ७० हजार बैंकको व्याज बुझाएर बाँकी रहेको ३० हजार मेरो बचत आम्दानी थियो । जुन रकमबाट घरखर्च चलाउँदै आएको थिएँ । करीव ३ महिनादेखि लकडाउनका कारण रेष्टुरेन्ट पुरै बन्द भयो । सरकारले एक महिनाको घरभाडा तिर्नुपर्दैन भनेको थियो । तर घरधनीले छुट दिन सक्तिन रे। दुइमहिनासम्म कर्मचारीलाई पनि बल्ल बल्ल पालेको थिएँ । अहिले उनीहरु घर गएका छन् ।
अब लकडाउन खुल्छ भन्ने सुनेको छु । लकडाउन खुलेको भोलीपल्टै घरबेलीले ३ लाख रुपैयाँ ठिक्क पार्न भनेका छन् । अनि सुन्दैछु बैंकले पनि ३ महिनाको किस्ता एकैपटक माग्ने हो रे । गभर्नर ज्यू । तपाईले भनेपछि बैंकले मान्छन् भन्ने सुनेको कुरा के साँचो हो ? हो भने बैंकलाई ६ महिनापछि किस्ता बुझाउँदा हुन्छ कि भनेर अनुरोध गर्नका लागि यो पत्र लेख्दै छु ।
मेरो समस्याहरु यसप्रकार छन् ।
• लकडाउन खुलेपछि रेष्टुरेन्टमा सामान ल्याउनुपर्छ ५० हजार ऋण खोज्नुपर्ने भएको छ ।
• लकडाउन अवधिभर रासन पानी गरेको किराना पसलललाई ७५ हजारजति ऋण तिर्नु पर्नेछ ।
• छोराछोरीको स्कूलबाट लकडाउन खुल्नेवित्तकै फिस ल्याउनु भनेर फोन आएको छ ।
• मसँग कत्ति पनि पैसा छैन ।
• रेष्टुरेन्ट बिक्रि पनि हुँदैन ।
• आफू बस्ने घर को बिजुली, पानी को बिल पनि तिर्न सक्ने अबस्था छैन
• घरीघरी लाग्छ आत्महत्या गरुँ ।
• यदी आत्महत्या गरेँ भने मेरो परिवारले बैंकको ऋण तिर्न पर्ला कि नपर्ला ?
गभर्नर ज्यू, यति भनिसकेपछि यहाँले पक्कै बुझ्नुभएहोला मेरा समस्या । हुन त यी समस्या मेरो लागि मात्रै ठुलो हुन सक्छ । अरुका लागि मेरो समस्या सामान्य हुन सक्छ । कृपया यस्तो बेलामा ६ महिनासम्म बैंकको किस्ता पछाडि सार्दिन भन्नु भयो भने मैले रेष्टुरेन्ट संचालन गरेर कमाएको पैसा बैंकलाई दिने थिएँ । प्लिज गभर्नरज्यू लौन बैंकलाई सम्झइदिनुपर्यो ।
पत्रकार अरबिन्द गाैतमकाे समाचार प्रभाव, पीडितले पाए सहयाेग (भिडियो सहित)
एनसेलले ३९ अर्ब बढि लाभकर तिर्नुपर्ने
सिमा अतिक्रमण विरुद्व तरुण दलकाे प्रदर्शन
पब्लिक सुत्रधार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकाे आयाेजनामा रक्तदान कार्यक्रम
पार्किङको लागि जग्गा किन्न पलाञ्चोकमा महायज्ञ, नगरप्रमुख खरेलले पत्रकार सम्मेलनमै १ लाख ८ हजार सहयोग घोषणा